Amazinga Igazi glucose
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu uqala ukuba baphuze uketshezi ngaphezulu kokujwayelekile; ukuchama kaningi, kuhlanganise ebusuku; Unomuzwa wokuthi isikhumba yakhe ayizange ibe ngumhlabathi owomileyo, akusho ukuthi kufanele enzeni. Abaningi kulesi simo usungula eziningi izizathu hhayi ukuya kudokotela, bekholelwa ukuthi "kuyakudlula ngokwalo."
Kodwa konke lokhu akuthathi indawo ngokwalo. Uma uqaphela izimpawu ezinjalo umuntu kumelwe aqale ukunquma ezingeni glucose egazini. Lokhu kungenziwa nganoma iyiphi laboratory, kodwa kungcono ukuxhumana phakathi nesonto ku umtholampilo emphakathini.
Emva imiphumela yokuhlolwa kwegazi etholakala, kubalulekile ukuba ngihambe nawo kudokotela - I-temusho, ungakwazi uxhumane nodokotela noma umndeni udokotela, ngubani oyoba ekuqondisela endocrinology uma kunesidingo.
Amazinga Igazi glucose - indlela Kungaba yini?
Namuhla, ngesilinganiso kashukela kufanele kakwaziwe yibo bonke abantu. Izinga glucose egazini, ngesilinganiso elisezweni ububanzi hhayi ngaphezulu kuka 7.8, uma kulinganiswa e mmol / L, zingahluka ngokuya etimeni letehlukene. Lokhu kusebenza futhi umuntu enempilo. Ukwenyuka igazi namazinga kashukela egazini okubangelwa ukusetshenziswa kwanoma iyiphi ukudla, ikakhulu omunye ephethe Inkomba okusezingeni eliphezulu glycemic.
A ukwanda okusheshayo kule inkomba icuphe ukukhululwa kwe-insulin, ukwehlisa ushukela egazini. Ngenxa ukusabela ngaleyo ndlela ngemva udla amaswidi umuntu zilamba ngokushesha okukhulu. Ngenxa yalesi sizathu, akudingekile ukuba ukwanelisa iphango labantu amnandi.
Yehlisa lokuhlushwa ushukela egazini ngokuvamile ngemva kokuzivivinya okujula okusezingeni eliphezulu, kanye nezimo ezicindezelayo. Kulokhu, umuntu uzwa indlala ebuthakathakeni. Ukuqeda kulesi simo, udinga nje okudliwayo.
Ngaphezu kwalokho, lo lokuhlushwa ushukela egazini Ungashintsha ezimweni sokugembula. Ngokuvamile ngokweqile ephikelelayo esiphezulu ezingeni ovumelekile. Ibonisa ukuthuthukiswa sikashukela.
Kodwa futhi kashukela zingancishiswa. Lesi simo kuthiwa i kahle kungakhuphula izinga likashukela. Kahle kungakhuphula izinga likashukela ngokuvamile kwenzeka kubantu abaphethwe isifo sikashukela, nge kokunikezwa kwe-reception ekunciphiseni ushukela amalungiselelo. Nge ukwehla elibukhali amazinga igazi glucose e abantu bangase ukuthuthukisa ikhoma hypoglycemic. Lesi simo sidinga ukuphatha ngokushesha glucose ngemithambo yegazi esigulini.
Izindlela ukulawula emakamu ushukela egazini
Umuntu akusho abanesifo sikashukela, ungabheka imiphumela ukuhlolwa igazi umunwe kanye njalo ezinyangeni eziyisithupha, lokhu kuyoba okwanele. Uma umuntu egula sikashukela, kanye kokuthola ukwelashwa zikashukela-ukwehlisa kubalulekile ukulawula njalo ezingeni glucose egazini.
Ungakwazi Yiqiniso, ukuba unikele ngegazi ukuze ushukela egunjini lokucwaninga esibhedlela. Nokho, zibelula ukuthenga imitha kwegazi glucose engasetshenziswa ukulawula igazi glucose lokuhlushwa nsuku zonke ekhaya.
Kungani kubalulekile ukugcina ushukela evamile igazi?
elithi ukulondolozwa Long i okuhlushwa isigqugquzeli glucose egazini ngokuvamile kuholela ushintsho igazi rheology. Kuba ayazika, ukumelana layo kwandisa ukugeleza ngokusebenzisa izitsha kuholela yokuthi ukuthi izicubu womuntu ungatholi-mpilo ngokwanele.
Lokhu ikakhulukazi liphinyiselwe izitsha ezincane igazi, okungukuthi ku-capillary. Ngenxa yalokho, isiguli ezinjalo yezinkinga ezihlukahlukene - retinopathy (umonakalo iso), nephropathy (isifo sezinso), emithambo yegazi emilenzeni. I inkinga olunzima kungenziwa ngokuthi unhlangothi noma isifo senhliziyo.
Njengoba kumele kube sobala kusukela ngenhla, kubaluleke kakhulu ukuba wonke umuntu ukuba aqaphele lokuhlushwa glucose egazini futhi ulawule izinga njalo. Kubalulekile ukwenza kanjalo ngaphansi kokuqondisa udokotela wakho - i nongoti endocrinology noma jikelele.
Njengoba zastavit umyeni brosit egodini? Isici ngokwengqondo inkinga
Indlela yokusula computer isilondolozi (iziphequluli)
Nezizwe zala Krasnodar Territory: Russian, Armenia, Ukraine, AmaTatar
A kwesidumbu luhlolo forensic: ukuziphatha kanye nemiphumela
Ikamelo lomshado eMoscow: ukubuka konke, izici nokubuyekezwa kwezivakashi
Ngilisusa kanjani ilungelo credit card?